Warshadaha Istaraatiijiyada Dhiirrigelinta - Soo -saareyaasha iyo Alaab -qeybiyeyaasha Dhiirrigelinta Shiinaha
Alaabada xayeysiinta ahi waxay kaa caawin karaan soo jiidashada macaamilka si ay u iibsadaan badeecadaha, u kordhiyaan mugga iibka. Oo kor u qaad aragtida dadka ee astaanta. U oggolow dad aad u badan oo ku saabsan sumadda. Hadiyadaha dhiirrigelintu waa sidaha dareenka shucuureed ee u dhexeeya shirkadaha iyo macaamiisha. Si loo dhiso buundo shucuureed leh macaamiisha, shirkaduhu waxay tamar badan gelin doonaan iibsashada iyo adeegsiga hadiyadaha xayeysiinta. Marka la barbardhigo qiimaha sare ee warbaahinta xayeysiiska, hadiyadaha xayeysiinta waxay leeyihiin qiime jaban, saamayn wanaagsan, natiijooyin degdeg ah. Waa mid ka mid ah tallaabooyinka dhiirrigelinta ugu wax-ku-oolka badan. Baahida sii kordhaysa ee hadiyadaha xayaysiinta ee xayaysiinta ayaa noqotay isbeddel lama huraan ah. Alaabooyinka xayeysiinta ahi waxay noqon karaan xayaysiis guuritaan ah. Waxyaabaha kala duwan ee dhacdooyinka kala duwan. Waxaan kaa caawin karnaa helida fikradahaaga, alaabooyin kala duwan oo aad ka dooran karto warshadeena, fadlan ha ka labalabeyn inaad nala soo xiriirto!
Iibiyaha Dhalada Midabada leh ee Midabada leh / Joojiyayaasha Khamriga Cas
Dadka haysta Cabitaanka Neoprene / Neoprene Koozie / C ...
Warqadaha Timaha Sixirka
Qalabka timaha kirismaska
Madaxyada Isboortiga Iyo Cumaamadaha
Dharbaaxada Kirismaska ​​ee Kirismaska
Qaabka Sawirka Kirismaska
Haysta Kaarka Ganacsiga